श्रावण ४, २०७६ ०३:०४:३३
सडक डिभिजन हेटौंडाको माइकिङ : २५ मिटर सडक बिस्तार भोलिदेखि सुरुहुन्छ असार २२, २०७६
हेटौंडामा करेण्ट लागेर एक जनाको मृत्यु असार २२, २०७६
हेटौंडामा भएको खुल्ला फुटसलको उपाधि विजय युथको पोल्टामा असार २१, २०७६
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले ब्यापार मेलाको 'कर' तिरेन, कर कार्यालय किन मौन ? मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला–२०७५ को आय-व्यय सार्वजनिक गरेपनि हालसम्म करको छिनोफाने लगाउन सकेको छैन । जनतालाई गुमराहमा राख्ने गरि उद्योग वाणिज्य संघले सार्वजनिक गरेको दोहोरो प्रणालीको हिसाब अझै पनि किनारा लगाउन सकेको छैन । पल्पसा अतिथि गृहको नाम गरेर ५८ लाख ४२ हजार ६ सय ३४ रुपैया आम्दानी देखाएर कर छल्ने तरिका अपनाएपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयको चासो बढेको थियो । असार २१, २०७६
हेटौंडाको नवोदय शिशु सदनमा अन्तर विद्यालय स्थलगत कविता लेखन प्रतियोगिता २०६ औं भानु जयन्तीको अवसरमा दोस्रो जिल्लाव्यापी अन्तर विद्यालय स्थलगत कविता लेखन प्रतियोगिता शनिबार भएको छ । हेटौंडाको नवोदय शिशु सदन अङ्ग्रेजी विद्यालयले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा जिएस निकेतनका यारिका कार्की, बालउज्ज्वल माविका सानुमाथा थिङ र भानु माविका सुशान्त दाहाल उत्कृष्ट भएका छन् । उनीहरुलाई नवोदय विद्यालयका शैक्षिक संयोजक अव्यक्त खनालले नगद ३ हजार रुपैयाँसहित पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रहेका १८ वटा संस्थागत तथा सामूदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए । असार २१, २०७६
काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का महसुस, सर्वसाधारण त्रसित काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । शनिबार अपराह्न ४ बजेर १५ मिनेटमा धक्का महसुस भएको हो । असार २१, २०७६
हेटौंडामा खसीको मासु अभाव, व्यवसायी भन्छन् : घाटा खाएर बेच्दैनौं हेटौंडामा खसीको मासु अभाव भएको छ । व्यवसायीले आफूखुसी हेटौंडामा मासुको मुल्य बढाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले व्यवसायीहरुलाई बोलाएर तत्काल मुल्यबृद्धि नगर्नु भनेपछि व्यवसायीले खसीको मासु बेच्नै छाडेका छन् । प्रतिकिलो ८ सय रुपैंयामा मासु बिक्रि गर्दा घाटाहुने भन्दै व्यवसायीले हेटौंडामा बिहीबारदेखि खसीको मासु बिक्रि गर्ने छाडेका छन् प्रतिकिलो ८ सय रुपैंयामा घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै व्यवसायीहरुले असार १ गतेदेखि प्रतिकिलो १ सय रुपैंया मुल्य बढाएको थिए । असार २०, २०७६
स्कुलरोडको हेटौंडा जापान बिजनेस कन्सल्टेन्सीले टेरेन प्रशासनलाई, छोडेको छैन बिद्यार्थी ठग्न ! हेटौंडाको स्कुलरोडमा संचालित हेटौंडा जापान बिजनेस ट्रेनिङ स्कुल अबैध रुपमा संचालन भैरहेको छ । युनिक अल्फा एजुकेशन कन्सल्टेन्सी प्रा.लि को पान नम्बर राखी हेटौंडा जापान बिजनेस संचालन भैरहेको छ । शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि गतिविधि संचालन गर्ने यस सस्थाले हाल जापानिज भाषा पढाइरहेको छ । कुनैपनि इन्स्टिच्युट कन्सल्टेन्सीले अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर मात्र संचालन गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि हेटौंडा जापान बिजनेसले अबैध रुपमा संचालन भई बिद्यार्थीबाट चर्को शुल्क उठाउदै आइरहेको छ । असार २०, २०७६
हेटौंडाको टुडल इन्स्टिच्युट अबैध, प्रशासनको निर्णय लत्याउदै कक्षा संचालन हेटौंडा ४ स्कुलरोडमा रहेको टुडल इन्स्टिच्युट अबैधरुपमा संचालन भैरहेको पाईएको छ । टुडलले सम्बन्धित निकायबाट कुनैपनि अनुमतिपत्र नलिई विभिन्न भाषा कक्षा संचालन गरिरहेको पाइएको छ । कूनैपनि निकायमा दर्ता नै नगरी टुडललेले अबैधानिक रुपमा विभिन्न कक्षा संचालन गरि चर्को शुल्क उठाइरहेको पनि पाइएको छ । कम्पनि रजिस्ट्रार कार्यालयमा टुडलको नाममा दर्ता भई आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडाबाट दर्ता प्रमाण पत्र लिएको भएपनि स्वीकृतिपत्र लिएको छैन । अबैध सस्थाको बारे बारम्बार खबर प्रकाशन हुनथालेपछी प्रशासनले चासो देखाउन थालेको थियो विभिन्न मितिमा सुचना जारि गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा केहि दिन बजार अनुगमन पनि भयो । केहि अबैध सस्थामा प्रशासनले शिल पनि गर्यो । विभिन्न व्यवहारिकतालाई हेर्दै केहि दिनपछी लगाइएको शिल प्रशासनले नै खोल्यो । तरपनि यहाँ शिक्षाका नाममा गैरकानुनी धन्दा चलाउने घटेका छैनन् । असार २०, २०७६
हेटौंडामा खसीको मासुको मुल्य बढेपछी प्रशासनको चासो हेटौंडामा खसीको मासुको मूल्य बढेपछी प्रशासनले चासो देखाएको छ । व्यवसायीले आफूखुसी हेटौंडामा मासुको मुल्य बढाएको भन्ने गुनासो बढेपछी प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले शुक्रबार व्यवसायीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । उपभोक्ता समिति, उपमहानगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ लगाएतलाई कुनै जानकारी नै नगराई आफूखुसी मुल्य बढाएकाले हामीले व्यवसायीलाई बोलाएर निर्णय गरेका छौं सिडिओ तामाङले भने । असार १९, २०७६
२५ मिटर सडक बिस्तार हुन्छ- हुन्छ : सडक डिभिजन डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले राजमार्गको दाँया-बाँया २५-२५ मिटर सडक सिमाको अतिक्रमण १५ दिनभित्र हटाउन आदेश सहितको सूचना निकालेपछी अहिले हेटौंडामा २५ मिटर सडक भत्किन्छ कि भत्किदैन रु भन्ने चर्चा निकै छ । उद्योग बाणिज्य संघले १६ मिटर कायम गर्नुपर्छ र मुवाब्जा दिएरमात्र भत्काउनुपर्छ भन्दै आवाज उठाईरहेको छ भने प्रदेश ३ सरकारले यस अघिनै संघीय सरकारलाई १६ मिटर कायम गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरेको थियो । असार १७, २०७६
तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल चीन प्रस्थान ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल ५ दिने चीन भ्रमणका लागि मङ्गलबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । केही समय अगाडि भगिनी सम्बन्ध कायम भएको चिनको गान्सु प्रान्तका गभर्नरको निमन्त्रणामा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा मंगलबार बिहान ७ जनाको टोलि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुसङ्गको सम्बन्ध हेर्ने गान्सु प्रान्तको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरीएको छ । चिनको गान्सु प्रान्तको लान्झाउ शहरमा १८ गतेदेखि २१ गतेसम्म आयोजना हुने विविध कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले सम्बोधन समेत गर्नुहुनेछ । तालिका अनुसार मुख्यमन्त्री पौडेलले डेभलपमेन्ट फोरम एन्ड कोरिडोर लजिस्टिक इन्डस्ट्री प्रोमोसन कार्यक्रममा सहभागि हुनुहुनेछ । १९ गते २५ औ चीन लान्झाउ इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेड फेयर एन्ड हाई इन्ड फोरम अन सिल्क रोड कोअपरेसन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुनेछ । सोही अवसरमा गान्सु प्रा असार १७, २०७६
रोकिएन हेटौंडामा अबैध इन्स्टिच्युटको ठगी धन्दा, कता सेलायो प्रशासन ? हेटौंडामा विभिन्न भाषा प्रशिक्षण, पुर्व तयारी कक्षा तथा ट्युसन लगाएतका कार्यक्रम संचालन गर्ने इन्स्टिच्युट तथा कन्सल्टेन्सीका बारे हामीले निरन्तर खबर सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौं । हेटौंडामा यस्ता सस्था ३ दर्जन बढी छन् तर केहि बाहेक सबै अबैधानिक छन् । अबैध सस्थाको बारे बारम्बार खबर प्रकाशन हुनथालेपछी प्रशासनले चासो देखाउन थालेको थियो विभिन्न मितिमा सुचना जारि गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा केहि दिन बजार अनुगमन पनि भयो । केहि अबैध सस्थामा प्रशासनले शिल पनि गर्यो विभिन्न व्यवहारिकतालाई हेर्दै केहि दिनपछी लगाइएको शिल प्रशासनले नै खोल्यो तरपनि यहाँ शिक्षाका नाममा गैरकानुनी धन्दा चलाउने घटेका छैनन् । असार १५, २०७६
आज असार १५, राष्ट्रिय धान दिवसः प्रदेश ३ मा ९ प्रतिशत रोपाइँ मुठी खाएर मुरी उब्जाउने महीनाको मध्य अर्थात् असार १५ गतेका दिन नेपाल राज्यभर धान दिवस, रोपाइँ यात्रा आदि नामले मनाइँदै छ । कृषि प्रधान देश भएकाले नेपालका अधिकांश मानिसको पेशा खेतीपाती हो । किसान वर्षभरका लागि छाक जुटाउन यो महीनामा खेतीमा ब्यस्त हुन्छन् । आजका दिन असारे भाकामा लोकदोहोरी गाउँदै छुपुछुपु हिलोमा धान रोपिन्छ । ‘छुपु र छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौँला, बनाई कुलो लगाई पानी आएर गोडौँला’ जस्ता लोक लयका गीत गाएर खेतमै रमाइलो पनि गरिन्छ । असार १५, २०७६
हेटौंडामा ट्यांकरले मिनिट्रकलाई ठक्कर दियो हेटौंडा उपमहानगरपालिका ९ पशुपतिनगरमा एक ट्यांकरले अर्को मिनिट्रकलाई ठक्कर दिएको छ । ना ७ ख ३२५६ नम्बर को ट्रकले बि आर ०१६६३६८१ नम्बरको भारतीय मिनिट्रकलाई ठक्कर दिएको हो । दुर्घटनामा कुनै मानवीय भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ । दुवै सवारीको अगाडिको भागमा क्षति पुगेको छ । असार १४, २०७६
विषालु च्याउ खाँदा मकवानपुरको राक्सिराङमा एक किशोरीको ज्यान गयो, ३ जनालाई हेलिकप्टरबाट चितवन लगियो मकवानपुरको विकट राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नं ७ दाराङमा विषालु च्याउ खाँदा एकजना किशोरीको मृत्यु भएको छ । दाराङकी १३ वर्षीया किशोरी गुञ्जमाया चेपाङको मृत्यु भएको मकवानपुर प्रहरी प्रमुख एसपी मुकेश कुमार शिंहले जानकारी दिनुभएको छ । अन्य ३ जना गम्भीर अवस्थामा छन् । असार १३, २०७६